» मेघा श्रेष्ठले जितिन् ४ वटा अवार्ड
मेघा श्रेष्ठले जितिन् ४ वटा अवार्ड
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २०:३४
मकवानपुर, १ फागुन । नेपाल आईडल सिजन ३ को उत्कृष्ट १० मा पुग्न सफल मेघा श्रेष्ठले नेपाल आईडलमा ४ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । गाला राउण्डको तेस्रो हप्तासम्म आईपुग्दा मेघाले चार वटा अवार्ड जितेकी हुन् । मेघा नेपाल आईडल सिजन ३ को एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता हुन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा उनले कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे, तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिमा पनि कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड र तेस्रो हप्ताकै उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा रेस्पेक्ट पफोमेन्स अफ द विकको अवार्ड जितेकी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
मेघाले उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा मुक्ति एण्ड रिभाईभल ब्याण्डको ‘कान्छी नानी ब्लुज’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । अवार्ड जितेसँगै उनले रेस्पेक्ट एण्ड राईजको तर्फबाट नगद २५ हजार रुपैयाँ जितेकी छिन् । मेघाको भोटिङ कोड एनआई ०५ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०५ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
मेघा श्रेष्ठ नेपाल आईडल सिजन ३ को एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता हुन् । २४ वर्षीया मेघा काठमाडौँ बसुन्धारा निवासी हुन् । मेघा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दाको समयदेखि नै सँगीत क्षेत्रमा सक्रिय थिईन् । त्यस समयमा नै ब्याण्ड प्रस्तुतिका क्रममा स्टेजमा उत्रने गरेको उनी सम्झन्छिन् । विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भएर पुरस्कार समेत जितेकी मेघाले १५ वर्षको उमेरमा भ्वाईस अफ टिनमा समेत सहभागिता जनाएकी थिईन् । संगीतलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग भन्न रुचाउने मेघाले ‘उमन ईन कन्सर्ट’ नामक प्रतियोगितमाा ट्यालेन्ट हन्टको उपाधी जितेकी थिईन् । उक्त शोकी आयोजक गायिका अभाया सुब्बाले नै उनलाई गायन कलामा अब्बल हुने तरिकाहरु सिकाएको मेघा बताउँछिन् । मेघो औपचारिक रुपमा संगीत भने नसिकेको बताउँछिन् । उनी आफ्नी आमालाई जीवनको पिल्लरको रुपमा परिभाषित गर्छिन् । उनको संगीत यात्रामा उनको आफन्तको पनि साथ छ । मेघाको हजुरबुवा विभिन्न बाजाहरु बजाउन सिपालु छन् । उनका आमा र बुवा पनि गीत गुनगुनाउँछन् । एकप्रकारले साँगितिक परिवारमै मेघा हुर्किएकी हुन् । मेघालाई उनकी आमाले नै नेपाल आईडलमा भाग लिन प्रेरणा दिएकी हुन् । फुडमाण्डुमा कार्यरत मेघाले औपचारिक अध्ययन समेत पुरा गरिसकेकी छिन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्ने छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।